Umbala oPhucukileyo ngolu hlobo, indawo yokuhlambela eyiHip ngokwenene!
Ikhaya / Blog / Umbala oPhucukileyo ngolu hlobo, indawo yokuhlambela eyiHip ngokwenene!
2021 / 03 / 29 uhleloBlog 6779 0
Uyilo lwangaphakathi luhlala luxhaswa ngumbala ukuyenza ibe noxinzelelo ngakumbi, kodwa ngokubhekisele kwindawo yokuhlambela, iskimu sombala sikhulu okanye sincinci kakhulu, nangona ukusetyenziswa kwetoni emnyama nomhlophe kuyinto yakudala, kodwa ekuhambeni kwexesha yenza ukubonwa okumnandi isiphumo, siyenza buthuntu.
Njengendawo yangasese yangasese, ngaba kufuneka ibe nombala wayo? Impendulo nguewe. Kule nkupho, makhe sithethe ngalo mbandela.
I-Orenji, ummeli wesikolo esiqaqambileyo sombala, inemozulu yayo ekhethekileyo ethambileyo. Okanye kumnyama okanye kukhanya, okanye kukhanya okanye kumnyama, ithoni nganye inemeko yayo eyahlukileyo ethambileyo, indlela yokungavumeli abantu ukuba banxile.
Luhlaza + orenji
Luhlaza, luzolile kwaye lunzulu, kufanelekile ukuzalisa indawo ngomlinganiselo omkhulu; iorenji iyakhanya kwaye icacile, kwaye umhombiso omncinci unokukhupha imeko engaqhelekanga nenamandla; xa ezi zimbini zidibana, zenza indawo emnandi ngaphandle kwenjongo.
Kwisicelo, kuyacetyiswa ukuba ukhethe indibaniselwano ye-low-saturation eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neorenji, engabonakalisi ngokugqithiseleyo kodwa ingakhanyi kakhulu. Umlinganiselo wesahlulo, luhlaza okwesibhakabhaka njengetoni ephambili, iorenji njengombala ogqamileyo, ngaphakathi nangaphandle komdlalo uhambelana ngakumbi.
Ingca eluhlaza + yekorale orenji
Kwindawo emnyama yokuhlambela ngombala omnyama nomhlophe, ngengca eluhlaza + yekorale i-geometric block block yokugcwalisa umbala, inokwenza igumbi lokuhlambela liqaqambe kwaye lithambe. Umdibaniso wokukhanya kunye nothambileyo wombala, ukutolikwa kwesimbo sokugqibela sobushushu obuthambileyo.
Njengommeli wombono wothando, ukuzaliswa kombala wepinki kuhlala kugcwele isimanga. Umbala wokukhanya kunye nokukhanya, zombini ezintle nezothando, kunye nobumsulwa obufana nentombazana, uyikhethe njengombala ophambili wendawo yokuhlambela, yinto enobulumko ukuyenza.
Ipinki + emhlophe
Iithowuni ezifudumeleyo ezipinki ezikhanyayo + ezimhlophe ukudala indawo yokuhlambela, ithoni iyonke ithambile, igcwele imeko yolutsha kwintombazana kunye nemfudumalo. Iithayile ezipinki kancinci ezinodonga olumhlophe njengotshintsho, umbala okhululekileyo kunye nokuzola kwengqondo, unika abantu amandla obushushu.
I-pinki enqunu + eluhlaza eluhlaza
Ukungqubana kombala wepinki enganxibanga + eluhlaza obumnyama kubekwe kumyinge wesithathu ukuya kwisibini, kuzisa imeko entle yeediliya. Isibini kwisithathu sesiseko esiluhlaza esimnyama, esongeza isinye kwisithathu somxube wepinki ohamba ze, umahluko onamandla wombala uvelisa uxinzelelo olubonakalayo olubonakalayo, okwenza indawo yonke yokuhlambela ibe bubugcisa.
Ipinki + emnyama
Imnyama kunye nepinki enye kwenye, nangona ingekho nyulu kwaye iqaqambile njengecala elimhlophe, kodwa ngakumbi ngolwimi olwenziwe ngokobuqu. Le mibala mibini iqhotyoshelwe kwizinto ezahlukeneyo ngaphezulu kweethayile, ukudibanisa ngokudibanisa phantsi kwemvumelwano engalindelekanga. Igumbi elipinki, elingaphantsi kobunqabileyo bendalo, ukuhamba kokuthintela okucacileyo kunye nokuhombisa, okuphela kukungqubana okumnyama ukuvelisa umtsalane wombala.
Ipinki + ngwevu
Olu ludibaniso lombala weklasikhi, ephezulu, ebukekayo, yothando, eyimbonakalo ebonakalayo abayibonisayo. Nokuba bahombisile omnye komnye, okanye bayalingana, banomtsalane wombala ongafanele ujongelwe phantsi.
Iskimu sombala oluhlaza
Luhlaza, owona mbala ubaluleke kakhulu kwiphalethi, nokuba kukusetyenziswa kwendawo enkulu okanye ukuhonjiswa kwendawo, kuhlala kungumtsalane wabo ukukhupha ifuthe elibonakalayo lokuzibonela, vumela abantu bathandane xa beqala ukubona.
Umbala womthi oluhlaza +
Umbala oluhlaza usetyenziswa njengeyona toni iphambili ukusasaza isithuba sonke, ukukhupha imeko-bume yendalo, kwaye isinki enombala womthi isetyenziswa njengesandi sokukhulisa incasa iyonke. Umboniso wombala we-rustic kunye nendalo unika yonke indawo ubuhle bendalo obungenakuthelekiswa nanto.
Luhlaza + Mhlophe
Intlanganiso eluhlaza kunye emhlophe inomdla ovuyisayo obonakala ngathi uvusa imeko enyulu yentliziyo entliziyweni. Umdlalo phakathi kwaba babini, ungakhathali malunga nenxalenye, okanye ukuhonjiswa, okanye amabini anesiqingatha, ngowona mboniso wokugqibela wothantamiso, wokuhlaziya kunye nomtsalane.
Luhlaza + Mnyama
Kule ndawo inkulu eluhlaza, umnyama ube ngumbala ogqamileyo phakathi komnye nomnye. Isitshixo esiphantsi kunye nesingeniso ngaphandle kokuphulukana nokuzola, ukwakhiwa kwesandulelo esivisisanayo, ukuze indawo yonke igcwaliswe ngengqondo engapheliyo yodidi oluphezulu.
Umbala oshushu obomvu, amaxesha ngamaxesha kunokuba ungabonakali, kodwa oko akuthethi ukuba awunakuba ngumbala ophambili. Nokuba ungakanani umyinge, isenombono obonakalayo onomdla.
Olubomvu + Ngwevu
Ubomvu obomvu obunzima bohlukile kweminye imibala emnyama, ithoni efudumeleyo engafakwanga indawo yonke enokunika indawo yonke ithuba le-retro yexesha, kunye nenqanaba elifanayo elinombala ongwevu, ukudala imeko enzulu nenomtsalane yodidi oluphezulu.
Olubomvu + omhlophe
Phakathi kokubomvu okuhlala kwindawo enkulu, kongezwe okumhlophe, kugqamisa imo yobuhle obuthathaka kunye nobuhle. Ukusuka kumbala obomvu ukuya kumbala omhlophe otshintshiweyo, uvela kubuhle obunamandla bethambeka.
Emva kokufunda la macebo ombala, ngaba kufunyenwe ukuba indawo yoqobo yangasese nayo inokuba “mbala”? Ewe kunjalo, xa kuthelekiswa nokuzimela grey okumnyama nokumhlophe, ukusetyenziswa kwemibala emininzi kwindawo yokuhlambela kwakhiwe ngombono oqinisekileyo wombono. Isidima kwaye ungalahli umntu ophezulu, ukuze abantu bonwabe.
Ngaphambili :: Umbala wegumbi lokuhlambela lowama-2021 Nge, Yithi Ndlela-ntle Kwi- “Earthy” Aesthetic, Vumela Ikhaya Lakho "Libala"! next: Eli ligumbi lokuhlambela, eliNdlu lakho liNdlu yangasese-Iindlela ezintsha zoYilo lwegumbi lokuhlambela ngo-2021
2021 / 04 / 22 2685
2021 / 04 / 21 3549
2021 / 04 / 12 5194
2021 / 04 / 12 5234
2021 / 04 / 12 4479